တွင် 2005, အဆိုပါ မြှားနီ 1000, Trenitalia ၏အမြန်ဆုံးရထားလမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်. Frecciarossa ရဲ့အမြန်နှုန်း 1000 တစ်နာရီလျှင် ၃၀၀ ကီလိုမီတာသာသွားသည်.
1) Trenitalia မီးရထား၏အားသာချက်မှာသင်ထွက်ခွာနိုင်ပြီးသင်သွားသောမည်သည့်မြို့မဆိုရှိမြို့လယ်သို့တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟူသောအချက်နှင့်စတင်သည်. မုချ, ဒီဟာရထားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်, သငျသညျရောမမွို့မှခရီးသွားလေ့ကျင့်လျှင်အထူးသဖြင့်ပါ, မီလန်, သုံးဘီး, ဂျီနီဗာ, ဒါမှမဟုတ်မိုနာကို, ၎င်းသည် Trenitalia အတွက်အဓိကအကျိုးရှိသည်. ခရီးစဉ်သည်မြို့လယ်ခေါင်သို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်, သငျသညျယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အားလပ်ရက်အပေါ်အသွားအလာ၌မှီဝဲခံရခြင်းထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးပါပဲ.
Trenitalia သည်အီတလီနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်, သို့သော်, အဓိကအမျိုးသားဘူတာမီလန်ဖြစ်ကြသည်, ရောမမြို့, ဗင်းနစ်, နေပယ်, တူရင်, ဘိုလော့ဂ်နာ, ဂျီနီဗာ, သုံးဘီး, နှင့် Verona. ရှိပါတယ် 11 နိုင်ငံတကာဘူတာ:5Trenitalia ရထားဘူတာသည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်6ပြင်သစ်ရှိဘူတာရုံများနှင့်သြစတြီးယား၊ ဂျာမနီ၊. ဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားတဲ့သင်ဟာလှပသောဥရောပကိုဖြတ်ပြီးအဆင်ပြေစွာနဲ့လျင်မြန်စွာခရီးသွားနိုင်ပြီးဘာတစ်ခုမှမပျောက်ဘဲအီတလီအမြင်ကိုလေးစားမိပါလိမ့်မယ်!